Okwu Semalt Na-ekwu Banyere WebHarvy, Otu n'ime Best Free Web Scrappers
Ịntanetị nwere ọtụtụ ihe nchịkọta data. Ụfọdụ n'ime ngwá ọrụ ndị a dị mma maka ndị ọrụ na-abụghị ndị ọrụ nchịkwa, freelancers, na ndị nkụzi, ebe ndị ọzọ bụ nhọrọ nke ụlọ ọrụ, nnukwu ụdị, na azụmahịa. WebHarvy bụ ngwanrọ ọhụrụ nke nchịkọta data nke nwere ike wepụ data site na ihe oyiyi, ozi-e, akụkụ Akwụkwọ Nsọ, na URL. Nke a freeware na-echekwa oge gị na ntinye data ma nye ọdịnaya dị iche iche. WebHarvy dị mfe iji ngwá ọrụ na-amalite ịmalite n'ime obere sekọnd - tutoriales para aprender a usar flash. Ọ na-ewepụta data sitere na ibe weebụ dị iche iche dabere na isiokwu gị ma chekwaa ya na ụdị ọrụ enyi na nke nwere ike ịhazi. Ụfọdụ n'ime nhọrọ ndị kachasị amasị ya bụ ndị a kpọtụrụ aha n'okpuru:
1. Ntube na Point
Ịhụ ihe ntanetị nchịkọta weebụ , WebHarvy nwere isi ma pịa interface ka i wee ghara ide ederede na Koodu mgbe ị na-ehichapụ data gị. Ọzọkwa, ị nwere ike iji ya wuru ihe nchọgharị iji kpogharịa ibe weebụ dị iche iche ma họrọ ozi iji kpochapụ ya na igodo igodo. WebHarvy bụ otu n'ime ihe ndị ahụ ngwaọrụ nchapu data nke na-ekwe nkwa nsonaazụ ọma ma ọ dịghị efu gị ihe ọ bụla.
2. Wepụ na Multiple Web Pages
Iji WebHarvy, ị nwere ike nyochaa data site na ibe weebụ dị iche iche dịka ndepụta ngwaahịa, ụlọ ahịa n'ịntanetị, adreesị ozi-e, saịtị akụkọ, ọbịbịa njem, wdg.Ngwaọrụ a, ọ bụghị naanị nbudata data kamakwa ọ na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịkwasa ebe nrụọrụ weebụ gị ma melite ogo ya na nsonaazụ ọchụchọ.
3. Ọkpụkpọ Scraping
Site na WebHarvy, ị nwere ike ichicha ozi site na ndepụta nke njikọ nke nwere ike iduga na ibe ma ọ bụ ndepụta nke saịtị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị nwere ike ịsị na ị nwere ike iji WebHarvy wepụ data sitere na saịtị ndị nwere ụdị dịka Amazon na eBay n'enweghị nsogbu na mma. Ọzọkwa, ngwa ngwa a na-ahazi nkesa na-ekewa data gị na-ekpuchi n'ime ụdị edemede dị iche iche.
Iwepụ data si na foto bụ otu n'ime nsogbu ndị siri ike anyị na-eche ihu n'ụbọchị ndị a. Site na WebHarvy, ị nwere ike ibudata ihe oyiyi ozugbo ha zuru oke ma ọ bụ na-efesa ha na draịvụ ike gị. Ngwaọrụ a ga-ese foto na-akpaghị aka na-egosipụta na ibe weebụ na ebe e-commerce.
5. Nchọpụta Ụdị Nchekwa Onwe
Ngwaọrụ a dị iche na mmemme ndị ọzọ na-ekpochapụ data n'ihi na WebHarvy nwere ike iji aka ya chọpụta usoro nke data na ibe weebụ. Ọ pụtara na ọ dịghị mkpa ka ị wepụ data n'otu n'otu site na ụlọ ahịa ọnụahịa na adreesị email. Nke ahụ bụ n'ihi na WebHarvy ga-ahazi ihe niile maka gị ma na-akpaghị aka chọpụta akara na usoro nke data scraped.
6. Scraping dabeere na isiokwu
N'adịghị ka ọrụ ndị ọzọ na-ekpochapụ ndị nkịtị, WebHarvy na-emepụta isiokwu nke dabeere na scraping maka onye ọrụ ya. Ọ pụtara ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụta ozi sitere na ibe weebụ dabere na isiokwu ha, ị nwere ike ịhazigharị WebHarvy ntọala ma kwe ka ngwá ọrụ ahụ rụọ ọrụ ya. A ga-esi na weebụsaịtị wepụta data site n'inweghi mkparị gị, ma ọ bụ mgbe niile na-enweghị ihe ọ bụla.
7. Nkwupụta Oge
Ọ dị mma ikwu na WebHarvy bụ ezigbo ihe ọzọ na Kimono Labs na Bubata. Ee. Nke a freeware na-ahapụ gị itinye okwu mgbe niile na ederede ma na HTML na isi mmalite ma nyochaa data gị na-enweghị imebi na mma.